Afartan – اربعون – Buugwadaag Network
Kitaabka 40 ee uu qoray Axmed Al-shuqayri waa buug uu ka qoray naftiisa se qofkasta oo akhriya uu ka dhex arki karo naftiisa qayb kasta oo buugga ka mid ah. Haa waad iska dhex arki kartaa waliba haddii aad ku dhaqanto waxyaabo badan oo wanaagsan ayaad naftaad ku so kordhin kartaa.
Buugga 40 waxa uu ugu magac daray waa 40 cisho oo uu keligii tagay Jasiirad cidla ah si u naftiisa u xisaabiyo dhinacyo badanna uu uga eego, waxa uu ka tegay ehelkiisi, asxaabtiisi, shaqdiisi, waddankiisi keliya si uu qiimayn ugu sameeyo naftiisa. 40 cisho waxa uu u doortay waxa uu ku jiray da’da 40-ka. Qoraagu waxa uu odhanayaa in aad naftaada la faqdo muddo haba noqoto hal saac malintii, amaba 24-saac usbuucii, waa shay qiimo nafta ku soo kordhiya. Waxa aad ogaanaysaa waxa kaa qaldan ee ay tahay in aad saxdo, waxa sax ah amaba wanaagsan ee aad samayso in aad sii joogteyso, in aad dib u habayn ku samyso xidhaadhkaaga Ilaahay iyo dadka kugu xeeran.
Waxa uu bilawga buugga hordhac ugu dhigayaa sababta isla kaliyaysiga anba in aad meel keligaa tagto ay muhiim u tahay, waxa uu odhanayaa naftaada dabee adiga oo ka tegaya dadka iyo tiknoolajiyada, hana noqod saxiibka safarkaagu dikirka Ilaahay iyo buugaag. Waxyabaha i soo jiitay waxa ka mid ahaa odhahda ku qoran “Ilaahay inagama rabo in aan noqonno dad dhinac walba ka dhammaystiran laakiin waxa uu inaga rabaa in aynnu joogtayno u socoshada dhinac wanaagsan” Isla keliyaysiga ayaa uu ku sheegay in anay macno so kordhinahayn haddii aanad ka lahayn ujeeddo iyo sababta aad doonayso in aad naftaada ula faqdo, wa in aad haysto wax kuu qoran oo aad doonayso in aad ku qiimayso naftaada.
Buuggan waxa uu ka kooban yahay 11 cutub oo cutub kasta ka sii koobanyahay 40 faqradood. Waxa ka mid ah 40 cisho iyo naftayda, 40 cisho iyo quraankayga, 40 cisho iyo noloshayda, 40 cisho iyo wanaajintaydii, 40 cisho is leegtaydii amab mucadaladaydii, 40 cisho iyo kutubtaydii, 40 cisho iyo sheekooyinkaygii, 40 cisho iyo Ilaahayga, 40 cisho xikmadda dadka, 40 cisho iyo xasuusahaygii iyo 40 cisho iyo xikmadaydii.
Haddaba cutubka koowaad ee ah 40 cisho iyo naftayada waxa uu ka hadlayaa naftiisa iyo sida uu isaga jaray caadooyinka xun ee uu laha iyo sida go’aan qaadshaada nafta iyo fulinta go’aanku ay uga qayb qaadato in aad ka guuleysto caadooyinka xunxun ee qofku leeyahay, tusaale waxa uu u soo qaadanayaa cabbitaanka sigaarka uu cabbi jiray iyo sida xataa aabbihi aanuu uga yeeli jirin in gurigiisa inta uu la joogo aanuu ku dhex cabbin, taasi ayaa uu odhaanayo ma ahi qof walidkii caasi ku noqonaya se shay xun marka aad ka tegyso waa in aad sidiisa u fulisa go’aanka aad kaga fogaanyso isla markana dadka kale tusto dhibka ay leedahay cadaadan xun si iyaguna ay iskaga daayaan. 40-ka qodob ee cutubkan waxa uu ka hadlayaa waa maxay farxad taasi oo uu odhanaayo ha la gelin tartan dadka se la gal naftaada tartan si ay maantadaadu ugu wacnaato shalay oo aad ku dhiirrato in malin walba malinta ka danbaysaa aad ka badiso naftaada.
Isla cutubkan waxa uu ka hadlaya waa maxay farxaddu taasi oo uu odhanaayo farxadda ma xaddidaan shay se waxa xaddidaa hadba waa argtidaada, haddii aad doonayso in aad badasho sheekada noloshaada keliya beddel caadooyinka aad leedahay iyagaa beddeleya qisadaada e. Isaga oo ka hadlaaya cadooyinka uu yidhi caqligu waa boqorka nafta, rabitaanka iyo caddifaaduna waa labada wasiir ee boqortooyada qofka bini’aadamka ah, haddaba ha ka dhigin boqorka oo caqliga ah in uu noqdo ciyaar gacanta ugu jirta rabitaankaaga iyo cadifadaada.
Waxa uu in badan ku dheeranaya dhibatada ay leedahay haddii nolosha qofka ay hoggimaayan rabitaankooda iyo caadifada. Waxa kale oo aad iiga soo jiitay bogan faqradda 22-aad oo ah sida loo gaadho go’aanada nolosha, qaybahooda iyo xalaalka sida lo kala doorto. Wax yaabaha kale ee uu ka hadalaayo waxa ka mid ah ehelka, waqtiga oo la nidaamyo faaidada ku jirta iyo siday hawalaha nolol malaameedka nidaamintooda muhiim u tahay isaga oo u qaybiyay 4 qaybood. Waxa kale oo isla cutubkan qoraagu inagu tusayaa in qofku uu dareemo masuuliyadda ka dibna uu qaato qaybta uu ku leeyahay ayna ka qayb qaadato horumarka naftiisa, ehelkiisa, iyo waddankiisaba.
Qoraagu waxa uu far cad ku xarriiqayaa in natiijo kasta oo ka timaadda marka la isku daro wax dhacay iyo felcelinta aad ka samayso ficilka. Waxa uu ku sheegaya in aanad ku canaanan dadka waxa dhacay anba ficilka ay sameeyeen keligood sababata oo ah natiija 90% waxa ay ku xidhantahay sida aad ugu falceliso taasi oo uu u kala qaybinaayo 10% waxa dhacay ,90% tahay habka aad ugu falceliso. Waxa ku jira buugga tusaalayaal ku tusaya haddii ay kugu adkaato in aad fahanto side falcelintu ay ugu qayb qaadan karta 90% natiijada ficil dhacay.
Buugga wax yabaha kale oo uu dadka ku boorrinaayo waxa ka mid in ay yeeshaan yool amaba hadaf nololeed oo waliba ay qoraan una qaybiyaan yool waqtiga dheer iyo ka maalinlaha ah sidii aad u gaadhi lahayd, yoolka muddada dheer. Buuggan xaga lacagta waxa uu ka eegayaa 3 dhinac oo kala duwan, meelo kala duwanna ku qoran ta kowaad waxa uu ku boorrinaya in uu qofku gaadho xorriyad dhinaca maalka ah oo aanuu noqon qof ilaa waligii noloshiisa ahaado qof dadka kale ku tiirsan dakhliga so gala, se uu u sameeyo qaab uu ku gaadhi karo in uu yeesho in ganacsiigiisa u gaarka ah kaasi oo ka bilawmaayo in uu ururiyo 10% musharakiisa ka dibna uu ku darsado meelaha share-aka ah si u helo raasamaal hadhow.
Ta labaad in uu qofku caadaysto in uu barto in uu la baxo sadaqad malinle ah hab yaraato waxa uu bixinayaa e, taasi oo ka qayb qaadan doonta in noloshiisa wax badan iska beddalaan Ilaahayna u barakeeyo maalkiisa. Ta ugu danbaysa waxa uu buugaan ku tusaya si kasta oo aad lacag u haysto in anaad ku bixin lacgtaada wax qaali lacagtiisu tahay sababto ah shirkadda so saartay magaceeda amaba waqtiga la soo saaray, waxa u ka sheekaynayaa sida uu gaadhi qoraagu uu iibsaday 10 sano ka hor aanuu marna u beddelin isaga oo waliba ah qof caan ah awoodna u leh in uu iibsado gaadhiga ugu danbeeya, gaadhiigisa uu beddelay maalintii uu ka xumaaday lacagtii lagu hagaajinaayay ay badatay, gaadhiga cusub ee uu iibsaday waxa uu ahaa gaadhi soo baxay bari dhexe, lacagtiisa iska jabnayd isla markaana ah mid raaxo leh dad badan oo kula taliyay in u gaadhi qaali ah iibsado waxa uu sheegay in gaadhigan u qabanaayo ka qaaliga ahi waxa uu u qabanaayo, lacagata uu ku qasaaraynaayo ee dheeradka ah ay tahay bilaa masuuliyad sababta oo ah xata haddaan awoodo maanta bari in aan caruurtayda wax uga tago ayaa ila qurux badan.
Buugaan qaybta noloshiisa waxa uu kaga hadlayaa dhibka ay leedahay in aad dadka ka doonto in ay qiimo ku yeelaan, taasi oo keenaysa marar badan in aad niyad jabto marka aad dadka ka weydo waxa aad ka doonaysay, waxa uu odhanayaa waxa aan naftayda ku qiimayn jiray “likes” iyo “comment” aan ka helo bulshada waqtigii khawadir barnamika aan waday ilaa aan ogaaday qiimahaygu in aanay ku jirin dadka se ay ku jirto Ilaahay. Waxa uu ka hadlayaa dhibka ay leedahay in aad caan noqoto oo marka dadka aad iska soo hor baxdaan ay kaa filaayaan wax ka badan intaad ahayd. Sabirka oo aad barato in ay tahay waxaad kaga gudbi karto.
Waxa ku jira tusaale uu doonayay in wax wanaagsan uu ku sameeyo mashruuc uu doonayay waddanka Sucuudiga iyo waddamada carabta uu wax ugu taro laakiin qofkii masuulka ahaa uu uga dhigay si qaldan, ugana faaidaystay taasi oo u tusaalooyin ka bixinaayo dhibkii loo geystay kuna bararuujinaayo akhristaha in si kasta oo ay niyaddaadu u wanaagsantahay waxaad doonaysaana u wanaagsan yahay haddii dadka aad dooranayso in ay qabtaan aanay noqon dadkii ku habboona amaba wanaagsanaa in aanay waxba kuu hirgalahayn dhibna aad kala kulmayso doorashada dadka kugu xeeranna ay ka muhiimsantahay wax kasta.
Doorashada dadka meelo dhawra ayaa uu kaga hadalayaa gaar ahaan asxaabtaada taasi oo uu odhaanayo dadka kugu xeeraan waxay ka qayb qaataan anba ay u sameeyaan noloshada micno wayn, ugu yaraan dooro 5 qof ee kugu dhaw noloshada in ay noqdaan dad ka qayb qaata horumarka naftaada.
Buugan waxa ku jira cutub sidaan hore ku so sheegay uu u bixiyay aniga iyo Qurankaygii waxa qoraaga uu sheegaya in uu muddo badan Quraanka akhriyi jiray se aanu marna ku fikirin in micnihiisa hoos ugu dhaadhaco taasi oo marar badan keentay in uu su’aalo badan iska weydiiyo aayaadaha qaar oo aanuu jawaab u helin intii uu akhrin jiray. Ka dibna uu baadhay macnahooda waxa ku jira cutub 40 ayadood aayad aad ii soo jiidatay qoraguna su’aalaha iska waydiin jiray oo ahayd “يا ليتنا نرد ولا نكذَب” markasta waxaan is weydiin jiray buu odhaanaya qoraagu in ay caddaalad tahay in addunka qof Ilaahay ku beeniyay muddo xaddidanna noola in uu qalmo in uu galo cadaab waligiiba uu ku jiraayo, se aayadan markaan baadhay ayaan waxa aan ogaaday isla quranka in Ilaahay ku sheegayo haddii uu so nolaysiiyo waligood, fursad kalena siiyo in anay marna rumaynahayn Ilaahay ayna halkoodii ka miisi doonan, taasi oo iga saaratay shakigii aan qabay. Waxa uu qoraagu ku talinayaa in qofka barto macnaha aayadaha ay ka qiimo badantahay akhriska oo kaliya ah.
Buugga cutub kasta waxa ku jira wax yaabo badan oo ah ficil uu qofku samayn karo, sida buugaagta dhiirrigeliyayaashu ka qoraan, si ka duwan buugan waxa uu qofka muslimka ah siinayaa hab u ku baran karo naftiisa, kuna qiimayn karo, buuggu waxa uu dhinacyo badan dul istaagaaya sida qofku dhinac walba ugu dhisnan karo tusaale ahaan buugga cutubka ka sheekaynaya buugaagta qoraaga saamaynta ku yeeshay ayaad ka dheehan kartaa sida uu so doortay 40 buug ee ku qoran cutubka uu ugu magac daray bugaagtayda taasi oo 40 bog ay ka mid yihiin buugaag diini ah oo aad u qiimo badan sida buugga kitab Al Arabciin Fii Usuul Diin iyo buugaag kale oo diinta ka hadlaayo, qaar kale oo ka hadlaaya xaga nolosha, qaar ka hadlaaya sida qofku uu kobcin karo lacagtiisa, qaar ka hadlaaya qoyska iyo sida ciyaalka lo tarbiyadeeyo. Ma aha oo kaliya cutubkan se cutub kasta waxa aad ka dheehan karta dhinac kasto oo nolosha ah.
Buugaan waxyaabaha aniga iga so jiitay oo dhawr meelood amaba cutubyo kale duwan ku qoran waa tiknoolajiyada, buuggan qoraagu waxa uu ku siinayaa dhawr App kuwaas oo ka qayb qaadan kara in aad gaadho hadafkaaga waxa ka mid ah App lo yaqaano Sleep cycle kaasi oo uu ku sheegaayo in ay ka caawisay isaga in uu tooso marka uu ku jiro hurdada khafiifka ah. waxaan ognahay in qofku marka uu seexdo uu maro dhawr marxaladood taasi oo aan ka arki karno markaan toosno mararka qaar adiga oo 10 saacadood hurday ayaa markaad kacdo wali hurdo ku haysaa oo aanad doonahayn in aad furaashka ka kacdo halka mararka qaar 4 sacdood oo keliya adiga oo hurday aad dareento in aad wax badan seexatay waxa labada kala duway ma aha inta sacadood ee aad huruday se waa kicidda amaba toosidda aad kacday adiga oo ku jira laba marxalood oo ka mida hurdada hadba app-kaasi waxa uu ka caawinayaa in aad kacdo marka aad ku jirto hurdada khafiifka ah taasi oo keenaysa in aad la soo kacdo firfircooni dheerad ah. Waxa kale oo uu qoraagu kaga sheekaynayaa sida ugu habboon ee baraha bulshada lo isticmaalo, xataa tirade sirta ah ee aad apps-ka ku xidhanayso iyo sida emailka lo nidaamiyo.
Ugu danbayn buugga oo dhammaystiran ma jiro oo aan ka ahayn kitaabka Ilaahay, mana jiro laba qof oo buug isku mida intay wada akhriyeen isku indho ku eegaay, se buugan waxa aan kugula talin laha in aad akhrido ugu yaraan haddii aad awooddo dhamaan, gaar ahaan 5ta cutub ee buuga ugu horreeya wallow xataa inta danbe ay ku jiraan qisaas wacan oo kugu dhiiri galinaya wanaagga.
Dr. Saynab Muuse Jaamac